Banyere Anyị - Ningnbo Yierka Seals Co., Ltd
Ningbo Yierka Seals Co., Ltd e guzobere na 1982 iji chọpụta, ịzụlite rụpụta na ere haịdrọlik na pneumatic akàrà. Ningbo Yierka si akara ngwaahịa na-arụpụtara na ọkaibe technology na elu àgwà na anyị siri ike ahịa na-elekwasị anya na e-emeri anyị na ntụkwasị obi nke ọhụrụ ahịa ebe ọ bụ na anyị tọrọ ntọala ụwa.
Yierka Seals nwere a ọkachamara ebu ìgwè ndị nnyocha na ebu nhazi center na ya nka na ngwaahịa imewe, ebu mmepe na mmepụta mwekota, ugbu a nwere ihe karịrị 20000set Ebu. Yierka Seals nwekwara ọtụtụ akara ihe formulations na iji dị elu àgwà ngwaọrụ na-esonụ mba ụkpụrụ otu mmepụta usoro nwere ike ahaziri iji nye ndị ahịa kpọmkwem ọkachamara akara ngwọta.
Yierka Seals bụghị nanị na-ewu ewu na China, ma na-ere Eastern Europe, Middle East, South American, Japan na Southeast Asia. Yierka Seals kwenyesiri ike na Innovation na iguzosi ike n'ezi bụ ụlọọrụ nkà ihe ọmụma dị mkpa iji mụbaa anyị horizons na inyere anyị ọhụrụ na ndị agadi ahịa na-eto eto na anyị, site na ike ike.